Child Recruitment and Use | allsanaag
25th May 2020 admin Category :
Caruurta Muqdisho iyo sida loogu diyaar gareeyo Maleeshiyadka Berito sidii YAlAXOW IYO MAHAD SALAD. Boqolaal Ciyaal ah oo ku ciidaya Qoyaha noocyadooda kala duwan oo caagaa ah waxa keenaya waa Bulshada ay ku dhex nool yihiin oo Qalinkii ka doortay QORI
Ganacsadihii ayaa inta uu dalka dibaddisa aado soo gadaya QORYTAHA noocan oo kale ah. Isaga oo og inay suuq leeyihiin oo uu dhaqso u tAajirayo.
Waalidkii uu Caruurtooda alaabo kale ku ciidsiin lahaa, ayaa iyaguna raaadinaya Dukaan Qorim lagu gado
Bulshadii ay ku dhex noolaayeen oo kii QORIGA qaata laga ixtiraamo. Maanta Cumur Filish iyo Yalxow ayaa ka mid ah madaxda Muqdisho oo horay boqolaal qof ugu dilay Muqdisho. In badan oo Muqdisho ku nool waxay aamnisan yihiin in jidka ugu fudud ee Caruurtoodu madax ku noqon karaan inay tahay inay u tababaraan sida qoriga loo qaato ama loo rido
Waa kuwan caruurtii hore ee waqtiga laga lumiyey oo qaarkood noqdeen Argagixiso
← Karaash oo qaadacay Iskushaandhayn Deni iyo Khilaafka Soomaalida →